KAOMININA AMBILOBE : Tantsaha miisa 400 nozarain’ny tanàna masomboly
Nizara masombolim-bary na ambioka tamin’ireo tantsaha ny ben’ny tanànan’Ambilobe, ny talata 23 janoary teo tao amin’ny faritry ny kaominina ihany. 24 janvier 2018
Ireo mpamboly vary avy ao amin’ny manodidina, Matsaborikilandy, Magnozombotokana, Laidama, Amba riopikira, Antsoha sy ny hafa avy ao anatin’ny kaominina ambonivohitr’Ambilobe no nozaraina izany. Mahatratra 400 ireo mpamboly nahazo tombony tamin’izany. Araka ny fantatra dia samy nahazo masomboly roa kapoaka avy ny tsirairay, tamin’ireo masomboly telo gony nozaraina.Voalaza fa masomboly afafy izay efa ahazoam-bokatra ao anatin’ny telo volana izany. Marihina fa samy nahazo ny anjarany ihany koa ireo avy amin’ny kaominina ambanivohitra ao anatin’ny distrikan’Ambilobe iny tamin’io masombolim-bary ireo.
Boky 569 nozaraina tamin’ireo sekolim-panjakana
Ankoatra izany dia nizara boky miisa 569 ihany koa ny ben’ny tanànan’Ambilobe izay fanampiana avy tamin’ny fikambanana iray Altm avy any Frantsa. Araka ny voalaza dia boky ho an’ny trano famakiambokin’ny kaominina ireo boky ireo, fa noho ny tsy fananana fotodrafitrasa toy ny "bibliothèque" dia nozaraina tamin’ny Epp Karibo ao Matiakoho, Epp regionale ao Matiakoho ihany ary ny Ceg Aridy Marcellin ireo boky ireo.
Boky ho an’ny mpianatra manomboka ao amin’ny Cm hatramin’ny kilasy famaranana izany ary isan-karazany, izay ahitana boky kajy, tantara, siansa sy ny maro hafa. Samy naneho ny fankasitrahana tamin’ny ben’ny tanàna ireo nahazo fanampiana ireo ary maromaroa ny tahaka izany.